Irrfan Khan an'ny 'Jurassic World' & 'Life of Pi' dia maty tamin'ny 53 taona
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Irrfan Khan an'ny 'Jurassic World' & 'Life of Pi' dia maty tamin'ny 53 taona
by Timothy Rawles Aprily 29, 2020
nosoratan'i Timothy Rawles Aprily 29, 2020
Ny mpanoratra iraisam-pirenena sady mpilalao sarimihetsika Irrfan Khan dia maty araka ny filazany The Hollywood Reporter, vao 53 taona monja izy. Nampidirina hopitaly tao Khan i Khan tamin'ity herinandro ity izay notsaboina noho ny tsimok'aretina.
Ilay kintana dia voamarina fa voan'ny homamiadana tsy fahita tamin'ny taona 2018.
Efa kintana Bollywood goavambe i Khan, ary nankany Hollywood izy ary tamin'ny 2007 dia nandray anjara tamin'i Wes Anderson The Darjeeling Limited. Herintaona taty aoriana dia hekena ho talenta manerantany milalao ilay inspektera polisy izy Slumdog Millionaire ary herintaona taorian'izay dia niseho izy Fiainan'i pi.
Fa ho an'ireo mpankafy mampihoron-koditra dia ho tsaroana i Kahn ho Masrani, tompony ary developer ny Jurassic World ao amin'ny Isla Nublar amin'ny sarimihetsika 2015.
Ny tatitra nivoaka avy any India dia nilaza fa ny sabotsy no maty ny renin'i Khan.
Ny vady aman-janany roa lahy kosa i Kahn.
Mirotsaka ny fiaraha-miory amin'ny Internet rehefa tsaroan'ny mpankafy ilay kintana, mpilalao sarimihetsika malaza Shatrughan Sinha niantso azy ho "mpilalao sarimihetsika mahay mandanjalanja."
Hijery: horohoro fandresena loka marobe 'Eto Misy vatan-tsoavaly'
Hiseho amin'ny fizarana manaraka amin'ny 'The Last Drive-In' i Tom Savini